I-China Carbide Rotary Burr SE Shape -Oval Shape abavelisi kunye nabathengisi | Xinhua
I-carbide rotary burrs SE imilo ingasetyenziselwa izixhobo zombane kunye nezixhobo ezinamandla ezinamandla okusika izixhobo ezifana ne-aluminium, i-titanium alloys, ubhedu, isinyithi, i-copper, i-zinc alloys, i-alloy steels, i-bronze, i-nickel kunye neeplastiki ezahlukeneyo, njl. Esi sixhobo sinokusetyenziselwa kuluhlu olubanzi lwezixhobo zomoya, izixhobo zombane.
● Isiqinisekiso sempahla yeentombi zeentombi eziyi-100%
● Izinto ezahlukeneyo ezinamabanga ahlukeneyo e-carbide.
● Ukuxhathisa okuphezulu, ukuhlala ixesha elide
● Ukulungiswa okuphezulu kunye nesantya sokusika.
● Ubuchwephesha obuphezulu be-welding technology
A: Sineenkcukacha eziqhelekileyo kwisitokhwe, kwaye sinokuthunyelwa ngaphakathi kweentsuku ezintathu emva kokuqinisekisa isivumelwano. Iimveliso ezenzelwe wena, iintsuku ezingama-25.
A: sineenkonzo zokulandelela eziqinisekiswe ngumgangatho kwiimveliso ezithengisiweyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Uya kufumana inkonzo eyonelisayo emva kwentengiso ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Egqithileyo Carbide Rotary Burr SD Imilo -Ball Imilo
Okulandelayo: I-Carbide Rotary Burr SF Shape -Imilo yeTree eneRadius End